Kindle Vella, ọrụ ọhụrụ sitere na Amazon maka ndị hụrụ ịgụ | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Kindle Vella, ọrụ ọhụrụ sitere na Amazon maka ndị hụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, anyị nwere ike ịsị na afọ ndị na-adịbeghị anya, Amazon emeghị ka ahịa ebook dị ka ọ dị na mbụ, nke a abụghị nsogbu ya ka ọ nọgide na-akwụ ụgwọ ọtụtụ ijeri n'ahịa a.
Ka osila dị, mwepụta nke o mere n’izu a abụghị naanị ihe masịrị ya ga-emepụta ihe na-ewu ewu n'ime ụwa ọgụgụ na n'ezie ụfọdụ ụlọ ọrụ amaliteworị mmepụta oyiri ya.
Mbido anyị na-ekwu maka ya bụ Obiọma Vella, a ọrụ na ụfọdụ ga-eru dị ka a ọnụ ala version nke Kindle Unlimited ma na m onwe m na-ahọrọ iru eru dị ka nwa nke ọrụ a.
Kindle Vella bụ ọrụ yiri Kindle Unlimited ma lekwasị anya na ndị na-agụ akwụkwọ micro, nke ahụ bụ ịsị, obere ọgụgụ nke anaghị erukarị peeji iri abụọ. Na nke ugbu a, Amazon egosila anyị na a gaghị agụ ihe karịrị okwu 20. Yabụ, Kindle Vella na-enye anyị ọgụgụ n'ọtụtụ isi ma ọ bụ usoro ebe onye na-agụ ya nwere ike ịnụ ụtọ ha na obere ego.
N'adịghị ka Kindle Unlimited, Kindle Vella na-enye gị ohere ịgụ isi nke mbụ ma ọ bụ mpịakọta n'efu na mgbe ahụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnọgide na-agụ anyị ga-akwụ ụgwọ maka ọgụgụ na tokens na anyị nwere ike ịzụta si Amazon.
Kindle Vella bụ ọrụ maka ndị hụrụ obere agụ akwụkwọ
O nwere ike iyi ka ọ naghị agwụ gị ike, mana ọ dị ka usoro telivishọn a na-akpọ ụwa nke ịgụ ebe akụkụ nke mbụ bụ n'efu ma ị ga-akwụ ụgwọ maka ya.
Mana Amazon chọrọ ịga n'ihu ma gbalịa ịgwakọta usoro teknụzụ na ọrụ a. A) Ee, ihe ndị a na anyị ga-azụta ọ bụghị naanị iji gbanwere mpịakọta ọhụrụ ma ọ bụ isi ọ bụla kamakwa ọ ga-ejekwa ozi ịgwa onye dere ya okwu ozugbo, na-ekwu ma ọ bụ forums banyere ụfọdụ ịgụ ma ọ bụ ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ Amazon na-ezube ịhazi na ndị edemede nke ọrụ na ndị ọrụ ha.
Kindle Vella bụ ọrụ Amazon nke ha rụworo ọrụ kemgbe ọtụtụ ọnwa, yabụ na anyị agaghị ahụ ọgụgụ ole na ole, mana anyị na ya rụkọrọ ọrụ ọtụtụ puku ndị edemede site na ụlọ ahịa ebook iji weta ọdịnaya na ikpo okwu ọhụrụ. Anyị bụ ndị ijuanya na-abụghị nke ihe na-eme na Prime Ọgụgụ, nke n’agbanyeghi na odi ochie, ma n’enyeghi otutu ihe dika Kindle Unlimited.
Mwepụta nke Kindle Vella abụrụla ma ọ bụ bụrụ ihe ọhụụ ebe ọ bụ na ọ bụghị ụdị Amazon. Ugbu a anyị nwere ike ịchọta Kindle Vella maka United States, nke ahụ bụ, site na saịtị a site na Amazon.com. Na, na-akpali mmasị, ị nwekwara ike jiri site na Kindle ngwa maka iOS. Ee, ugbu a anyị agaghị enwe ike iji ya na Kindu ma ọ bụ na mbadamba Amazon. Ihe tụrụ ọtụtụ ndị n’anya na ụfọdụ ekweghị.
N'ụzọ doro anya, Kindle Vella ga-abịarute mbadamba Amazon na ndị na-agụ ha, ọbụlagodi mgbe ọrụ ahụ na-enweta otu aha ahụ dị ka ezinụlọ nke ndị na-agụ ya, mana ọ ka na-ada.
Banyere tokens, ha agaghị abụ ego Amazon mana ọ bụ akara aka, a na-akpọ ụzọ ahụ na weebụ, na anyị nwere ike inweta Ihe ngwugwu 200 maka ego di ala nke $ 1,99 na mkpọ nke 1700 tokens maka $ 14,99.
Anyị maara na Amazon ekwuwo ma rụọ ọrụ na ọtụtụ puku ndị edemede iji mepụta ọrụ a n'ihi na echeghị m na ọrụ a bụ ihe na-apụ n'anya na oge ma ọ bụ na ọ ga-adịgide na ahịa United States, yabụ ọ ga-abụ oge tupu erute ngwaọrụ Amazon na ngwa ndị ọzọ, mana kedu ka ọ ga-esi ebe ahụ?
Amazon na Kindle Vella welitere nhọrọ nke nwere ike ịmasị ndị edemede, Amazon n'onwe ya na ndị na - agụ akwụkwọ ndị ọzọ: akwugo ugwo. Kemgbe mmalite ya, Kindle Unlimited ebulitela ọtụtụ esemokwu banyere etu esi kesaa ụgwọ sitere na ebook, na Kindle Vella onye ọrụ ga-akwụ ụgwọ na akara aka maka ịgụ na ọnụahịa nke akara ahụ ga-ekerịta n'etiti Amazon na onye edemede. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ nwere nnukwu ndị na-ege ntị, ma onye edemede ma Amazon ga-enweta ego buru ibu, nke nwere ike ịghọ ụdị nkwụnye ụgwọ ndabere na Kindle Unlimited. Maka ihe a niile, echere m na Kindle Vella abụghị naanị ọrụ ọzọ maka ịgụ site na iyi egwu mana ihe ọhụụ ga-aka akara ahịa ebook. O di nwute na o rubeghi Europe, ma anyi nwere ike inwe afọ ojuju na nsụgharị American.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » ụlọ ọrụ » Amazon unu si n'ihe unu » Kindle Vella, ọrụ ọhụrụ sitere na Amazon maka ndị hụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya
Kobo Clara HD ghọrọ mbadamba ekele PostmarketOS
Mepụta ihuenyo e-ink dị nso na akwụkwọ karịa mgbe ọ bụla